Daawo madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay heshiiska caalamiga ah ee dhowrista caruurta |
Daawo madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay heshiiska caalamiga ah ee dhowrista caruurta
War Saxaafadeed laga soo saaray Xafiiska Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa lagu sheegay dhinacyada saxiixday heshiiska, oo waxay kala yihiin.
Mr Nick Kay, Special Representative for the Secretary General, Mr Stephen Lauwerier, UNICEF Somalia Director, Sii-Hayeyaasha Wasaaradaha iyo Xildhibaannada Baarlamanka Federaalka
Mr Mahad Ahmed Mohamud Maamulaha Dugsiga Hamar Jajab Shaqaalaha iyo Ardeyda Dugsiga Xamar Jajab Staff and students of Hamar Jab-Jab School.
Waxaa farxad ii ah inaan maanta halkan idinkula dabaaldego saxiixa dukumentigan muhiimka ah ee Heshiiska Caalamiga ah ee Dhowrsita Xuquuqda Carruurta.
Mararka qaar, dokumentiyada uma muuqdaan inay aad muhiim u yihiin. Mararka qaar sida ay nolol maalmeedkeena u saameeyaan aad uma cadda.
Laakiin maanta, waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in dukumentigan uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee aan saxiixi karo anigoo ah Madaxweynaha Soomaaliya.
Sababta miyaad garaneysaan?
Sababtu waxay tahay in warqaddan gebi ahaanteedba ay idinka idin ka hadleyso ama idin khuseyso, haddaad tihiin carruurta Soomaaliyeed, iyo weliba carruurta dunida ku nool.
Dokumentigan — oo la yiraahdo Heshiiska Xuquuqda Carruurta — waxaa loo qorey iyadoo la aqoonsadey in carruurtu u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo taageero si ay u koraan iyagoo awood u leh inay kaalinta ugu wanaagsan ka galaan bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Korriinka waa sida safar la gelayo, balse aadan ogeyn goorta aad gaareyso meesha aad ku socoto, amaba sida aad ku gaari karto. Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in la barto, waxyaabo badan oo noloshaada soo maraya, iyo inaad mar walba sameyso xulasho cusub.
Korriimada carruurta ee Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay dhib badan tahay. Qaarkiin waxaa laga yaabaa inay weli xusuustaan dhacdooyin xanuun badan oo idinka iyo qoysaskiina idin soo marey. Cialis soft FRUIT no rx, buy Zoloft online.
Qaarkiin waxaa laga yaabaa inay is weydiinayaan waxa uu mustaqbalkooda noqon karo.
Allah ayaa mahad leh, waayo ma ihi oo keliya Madaxweyne, balse waxaan kaloo ahay aabbe. Waa shaqada aabbaha inuu carruurtiisa daryeelo, inuu guri amni leh u helo, si ay ugu koraan goob ay ku dareemi karaan in kalgaceyl loo hayo, la ilaalinayo, loona muujinayo jaceyl iyo daryeel gaar ah.
Ka Madaxweyne ahaan, shaqadeyda waa sidaas oo kale. Shaqadeydu waxay tahay inaan ka fikirin oo keliya carruurteyda, balse aan ka fikiro anna daryeelo carruurta Soomaaliya oo dhan. Shaqadeydu waxay tahay inaan la shaqeeyo dowladeyda, iyo ururrada caalamiga ee aan iskaashiga leenahay, sida Qaramada Midoobay si loo xaqiijiyo in hoygiinu uu ammaan yahay, isla markaana hooyooyinkiina iyo aabbeyaashiina ay haystaan wax kasta oo suuragelinaya inay idin fidiyaan daryeelka aad u baahan tihiin.
Shaqadeyda ayay qeyb ka tahay inaan xaqiijiyo inaad heshaan waxbarasho oo aad dugsiyada aaddaan, isla mar ahaantaana ay macalimiintiina si wanaagsan wax idin baraan. Waa qeyb ka mid ah shaqadeyda inaan xaqiijiyo in marka aad kortaan, aad shaqo heli kartaan si aad u caawisaan qoysaskiina.
Waxaan rajeynayaa inaan wadajir u abuuri doonno Soomaaliya oo nabad ah si aad ugu kortaan farxad. Taana waan ku guda jirnaa.
Dowladdeyda labadii sanno ee la soo dhaafey waxay qabatey shaqo adag si loo dhiso dal aad ku faantaan oo aad leedihiin. Waxaanu dhisney waddooyin, nalalna waa lagu qurxiyey si aad ammaan ugu martaan waddooyinkaasi.
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijayada sida kan UNICEF ee ‘Barnaamijka Aada Dugsiga’, waxaanu wadajir uga shaqeyney inaan dib u furno dugsiyo, inaan tababarno macalimiin, carruur badanna aan dib ugu celinno dugsiyada. Innagoo kaashaneyna Qaramada Midoobay, waxaan hirgeliney xarrumo cusub oo caafimaad, carruur badanna waxaa loo fidiyey talaal ka hortagga cudurrada ah, innagoo sidoo kale xaqiijiney in cuntada iyo biyaha ay gaari karaan goobaha ay ay ku nool yihiin dadka aan adeegyadaasi aasaasiga ah heli karin.
Waxaanu bilowney inaan qorno sharciyo idin ilaalinaya idinka iyo qoysaskiina si la idinkaga badbaadiyo dadka doonaya inay waddankeena burburiyaan.
Waxaanu abuurney fursado dadku ay si nabad ah ugu furan karaan ganacsi ay ka soo saartaan nolol maalmeedka qoysaskooda, isla markaana ay gacan uga geystaan dhaqaalaha iyo horumarka dalka.
Wax badan ayaan ku guuleysaney, wax kale oo baddanna waa inoo harsan yihiin.
Maanta waxan saxiixey Heshiiskan Xuquuqda Carruurta. Tani waxay ka dhigan tahay in Soomaalida ay idinku eegayaan sharaf aadminimo iyo inaad u qalantaan inaad hannaqaaddaan.
Ka Madaxweyne ahaan, aniga oo kaashanaya Baarlamanka, waxan aqbaley in Dowladda Federaalka ay dhowri doonto xuquuqdiina iyadoo loo marayo hab sharci ah.
Waxaan idin balanqaadeynaa inaad si siman u heli doontaan adeeg kasta oo dhameystiran sida sharcigu uu qabo. Waxaan balanqaadney inaan xaqiijino inaan marnaba la idin ka dhigin askar ama ciidan ilamaa aad ka noqotaan dad qaangaar ah oo go’aansan kara waxa mustaqbal ahaan idin fiican. Waxaan balanqaadney inaan xaqiijino in qoysaskiina ay idin fidiyaan daryeel iyo jaceyl, isla markaana aaney idin dayicin, amaba aysan isku dayin inay si xun idin adeegsadaan si ay idinkaga faa’idaan. Waxan balanqaadney inaan idin ka ilaalino dadka ay dhici karto inay idin maleegayaan waxyaabo xun xun. Waxan balanqaadney in iyadoon loo eegin jinsigiina wiil ama gabar, inaad heli doontaan fursado siman oo dhanka nolosha ah: inaad heshaan waxbarasho fiican iyo inaad heshaan shaqo wanaagsan. Waxaan balanqaadney inaan xushmeyno xuquuqdiina dhanka fikirka si xor ah, isla markaana aad soo bandhigtaan fikradahaasi.”
“Heshiis kasta waxaa uu leeyahay laba dhinac. Mar walba oo xuquuq dhowris timaaddo, waxaa la socda mas’uuliyado. Waxaan idin xusuusinayaa mas’uuliyadaha idin saaran. Waxaad tihiin Soomaali. Tani waa arrinta ugu horeysa, waana arrinta ugu muhiimsan. Waxaad qeyb ka tihiin ummad mid ah, qaran mid ah uu ka dhexeeyo, inagoo wadajirna ayaan abuurayna mustaqbal mid ah.
Waa inaad dugsiyada ku negaataan. Si wanaagsan wax u barataan. Waxaad fasalada ku barataan ficil ahaan u roga ama noqda kuwo nolosha caadiga ah u isticmaala. Waa inaad xishmeysaan macallimiintiina, waalidkiina iyo saaxibadiina. Waxaad ula dhaqantaan sida idinkuba aad jecleysan lahaydeen inay idin kula dhaqmaan. Waa inaad si deggan u dhegeysataan, dabeecadahiina ha noqdaan kuwo tusaale fiican bixiya.
“Waa inaad eegtaan amaba aad diiradda saartaan mustaqbalka. Ma aqbali karno in wixii la soo dhaafey ay ina xakameeyaan amaba ay mustaqbalkeena caqabad ku noqdaan. Haddii aad maqasho waxyaabihii hore uga dhacay Soomaaliya, waa inaadan la hayste u noqon xaaladahaasi laga soo gudbey. Waa inaad ka fikirtaa Soomaaliyada aad dooneyso mustaqbalka, sidaa darteed waa inaad taa ka dhabeysaa.”